VaMugabe naVaTsvangirai Vosangana Pake Pake neVatungamiri veSADC
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumwende, VaMorgan Tsvangirai, vari mushishi kuita misangano nevatungamiri veSADC sezvo vari kunetsana muhurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai vakasangana nemutungamiri weZambia, VaRupiah Banda, kuZambia kwakare neChipiri vachitaura zviri kunetsa muhurumende yemubatanidzwa. VaMugabe vakasanganawo neMugovera naVaBanda nemutungamiri weMalawai, VaBingu Wa Mutharika, vachitaurawo nhuna dzavo.
Pane mashoko ari kubva kuSADC anoti panogona kuitwa musangano weSADC Troika munguva pfupi inotevera wekuyedza kugadzirisa nyaya yeZimbabwe iyi. VaTsvangirai vanoti havasi kufara zvachose nehumbimbindoga huri kuitwa naVaMugabe muhurumende yemubatanidzwa.
Izvi zvinotevera kudomwa kwakaitwa magavhuna ematunhu pamwe nevamiri veZimbabwe kune dzimwe nyika naVaMugabe vasina kugara pasi naVaTsvangirai sezvinodiwa nechibvumirano chakavaka hurumende yemubatanidzwa.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muZambia, VaRonnie Shikapwasha, vatenda kuti VaBanda naVaTsvangirai vakaita hurukuro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaTrevor Maisiri, vanoti zvakakosha kuti VaTsvangirai varume nzeve vatungamiri veSADC nekuti VaMugabe varatidza kuti haasi munhu anogona kushanda nevamwe.
Zvichakadaro, mapurisa neChipiri anonzi akamboyedza kudzivisa VaTsvangirai kuita musangano nevatsigiri vavo kuCyril Jennings Hall kuHighfield.
Mapurisa aitsika madziro kunyange hazvo rimwe remakurukota ezvemukati menyika, Amai Theresa Makone, pamwe negurukota rezvemari, VaTendai Biti, vaivaudza kuti maitiro akadai ainge asiri pamutemo.
Asi mapurisa anonzi aiti ainge audzwa nemukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, kuti amise misangano yose inoitwa husiku sezvo ichizogona kuguma yaita mhirizhonga. Musangano uyu wakazoitwa asi pamboita kunetsana kwakanyanya. MDC inoti Zanu-PF iri kushandisa mapurisa kuita zvematongerwo enyika.
Mapurisa neChitatu akabvumidza MDC kuita musangano kuGlen View kunyange hazvo mapurisa akawanda aitenderera munzvimbo iyi.
Asi vanokokera Zanu-PF mudare reparamendse, VaJoram Gumbo, vanoti Zanu PF haisi kushandisa mapurisa mune zvematongerwo enyika.
Asi mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti ichokwadi kuti mamwe mapurisa ari kushandiswa neZanu-PF.
Mashoko aVaRonnie Shikapwasha
Hurukuro naVaTrevor Maisiri